Wargeysyada Ingariiska Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda. - jornalizem
Wargeysyada Ingariiska Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda.
Ramadan Kariim akhristayaasheena qiimaha leh meel kasta oo aad joogtaan, waxaa maanta idiin soo gudbineynaa wararka ay suuqa kala iibsiga ka qoreen wargeysyada Ingariiska, iyadoo aan maanta soo gudbin doonin xantii ay qoreen wargeysyada isboorti ee ka soo baxa Spain iyo Italy, kuwaasoo aan wax badan ka qorin suuqa maanta waxaana ay diirada saarayeen ciyaaraha Olimbikada.
Edin Dzeko ayaa uga digay Manchester City inuu ka tagi doono hadii lagu sii hayo kursiga keydka, taasoo sii shideysa wararka sheegaya inuu ku sii jeedo Serie A, iyadoo ay xiiseynayaan kooxaha Juventus iyo Milan. (Sunday Mirror)
Milkiilayaasha kooxda Liverpool ayaa taageeradooda buuxda oo suuqa kala iibsiga ah siin doono isbuucaan tababare Brendan Rodgers, iyagoo ku talo jira inay 15 milyan ginni ku dalbadaan ciyaaryahanka Swansea Joe Allen. (Sunday Mirror)
Dalabkii Liverpool ee ciyaaryahan Clint Dempsey ayaa laga yaabaa inay hakad geliso Roma hadii ay heshiis la gaari waayaan Fulham. Kooxda Fulham ayaa ku dooneysa ciyaaryahankeeda 10 milyan ginni. (Sunday Mirror)
Barcelona ayaa 15 milyan ginni ku dalban doonta ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Alex Song, si uu Camp Nou u la midoobo saaxiibkiisii hore Cesc Fabregas. (Sunday Mirror)
Kooxda Tottenham ayaa laga yaabaa iany dalabkeeda xiddiga Internacional Leandro Damiao ay geyso ilaa 20 milyan ginni, ka dib markii AC Milan ay soo gashay tartanka ciyaaryahanka. (Star on Sunday)
Daafaca bidix ee Chelsea Ashley Cole ayaa dalabanaya mushahar gaaraya 200 kun ginni isbuucii hadii uu heshiis cusub u saxiixayo Chelsea, lakiin Blues ayaan ku faraxsaneyn inay mushahar ahaan u siiyeen lacag intaas gaareysa ciyaaryahan da’diisa ay kor u dhaafeyso 30. (Star on Sunday)
Tababaraha kooxda Liverpool Brendan Rodgers ayaa diyaar u ah inuu laabto kooxdiisii hore ee Swansea City isagoo doonaya inuu kala soo wareego daafaca reer Wales Ashley Williams, iyadoo Daniel Agger uu diirada u saran yahay Manchester City. (Mail on Sunday)
Kooxda Chelsea ayaa ku dhow inay la soo wareegto xiddiga kooxda Wigan Victor Moses inkastoo 10 milyan ginni la duldhigay, halka tababaraha Wigan Roberto Martinez uu wax ka weydiiyay Everton xaalada ciyaaryahan Victor Anichebe. (Mail on Sunday)
Tababarihii hore ee Tottenham Harry Redknapp ayaa sheegtay in Spurs ay ka balanqaaday Luka Modric inuu ku biiri karo Real Madrid sannad ka hor. (Sun on Sunday)
Goolhayaha Faransiiska Hugo Lloris ayaa u saxiixi doona Spurs heshiis lagu sheegay 12 milyan ginni, waa hadii heshiiska Luka Modric lagu guuleysto. (Sun on Sunday)
Manchester United ayaa qorsheyneysa inay Chelsea ka qasto isku diyaarinteeda xilli ciyaareedka cusub, iyadoo heshiis la gaaraya weeraryahanka Borussia Dortmund ee lagu qiimeeyo 12ka milyan ginni Robert Lewandowski xagaaga soo socda. (Mail on Sunday)
Kooxda Tottenham ayaa ku hanjabeysa inay ka bixi doonta heshiiska ay kula wareegeyso Emmanuel Adebayor, iyagoo u jiheysanaya weeraryahanka reer Brazil Leandro Damiao. Adebayor ayaa mustaqbalkiisa uu ku jiraa mugdi ka dib markii Spurs ay ka carartay mushaharka uu dalbanayo. (Sunday People)
Inkastoo United ay rajo ka qabto inay soo xerogeliso Robin van Persie, waxa ay u muuqataa inuu iska sii joogi doono Emirates, weeraryahanka reer Holland ayaa laga dhaadhiciyay hamiga ay kooxda leedahay ka dib markii ay la soo wareegeen Lukas Podolski, Olivier Giroud iyo Santiago Cazorla. (Sunday Mirror)
Manchester United ayaa ogolaatay heshiis 30 milyan ginni oo ay kula soo wareegeyso ciyaaryahanka reer Brazil Lucas Moura, Sir Alex Ferguson ayaana rajo ka qaba inuu 50 milyan ginni kula soo wareego Lucas Moura iyo Robin van Persie isbuucaan, iyadoo qoyska Glazers ay fariin u dirayaan kooxaha kula xafiiltamaya Premier League. (Mail on Sunday)
United ayaa soo gabagabeyn doonta heshiis 30 milyan ginni ah oo ay Sao Paulo kala soo wareegeyso Lucas Moura 48da saacadood ee soo socota. (Sunday Telegraph)
Manchester United ayaa ceyrsaneysa saxiixa ciyaaryahanka reer Spain ee garabka ka ciyaara Isco, kaasoo qandaraaskiisa Malaga lagu burburin karo 20 milyan ginni. (Sunday People)
Kooxda Manchester City ayaa ka fiirsaneysa inay sameysay hal saxiix oo lama filaan ah iyadoo dalabanaya ciyaaryahanka garabka uga ciyaarayay xulka Great Britian iyo kooxda Swansea Scott Sinclair. Waxa uu diyaar ku noqon karaa 5 milyan ginni, iyadoo City ay ku soo jiidan doonto mushahar 60 kun ginni isbuucii ah. (Sunday Mirror)
Tababaraha kooxda Chelsea Roberto Di Matteo ayaa dalab 25 milyan ginni ah ku dalbanaya xiddiga Jarmalka Andre Schurrle, waxaana ay u arkaan ciyaaryahanka reer Bayer Leverkusen bedelka Didier Drogba. (Sunday People)